ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ ချဲထိုးကြရအောင်လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ ချဲထိုးကြရအောင်လား
ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ ချဲထိုးကြရအောင်လား
Posted by JUDGEMENT on Mar 1, 2012 in Cover Faces, Myanmar Gazette | 10 comments
ချဲထိုးကြမလား Mandalay Gazette ရွာသူ/ရွာသားအပေါင်းတို့ ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ ။စောစောက Gazette ထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာကတော့
မတ်လ (၁) ရက်နေ့။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းပြောမဲ့နေ့။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတကြီးလက်ထပ်မှာ ဘာတွေပဲကောင်းအောင်လုပ်လုပ် ဘာတွေဘယ်လိုပြည်သူ တွေဘက်ကိုပဲကြည့်ကြည့် အမှန်တကယ် လောင်းကစားတိုက်ဖျက်မှု့တွေမရှိသေးပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်
– လောင်းကစားပပျောက်ရေးရော အမှန်တကယ်ဘာမှမလုပ်ခဲ့သေးပါဘူး။ အသံကောင်းဟစ်နေတာပဲရှိပါတယ်။
လောင်းကစားမှု့ပပျောက်ရေး ဟာ (ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ရဲ့ အဓိကအချက်ပါ ။ဒါကို ဖြေရှင်း ပေးရမှာပါ။) ဒါ့အပြင် သာသနာတော်မှာ ချဲဘုန်းကြီး ၊
အရက်သမား ( ၀ိနည်းမညီတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကြောင့်) သာသနာတော်ဟာ ညိုးနွမ်းနေရတာပါ။ ဟိုတစ်နေ့ကများ အခွေတစ်ခွေထဲမှာ ဘုန်းကြီးနဲ့ ဒကာမမဖွယ်မရာပုံကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ JUDGEMENT သိတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလျှောက်ထားတော့ ဆရာတော်ကြီးကတော့ တိုတိုတုတ်တုတ်ပဲမိန့်တော်မူပါတယ်။ သံဃာ စစ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ကွာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ JUDGEMENT ကတော့ သံဃာစစ်သည်ဖြစ်စေ ၊
မစစ်သည်ဖြစ်စေ ဒါမျိုးတွေ ကိုမမြင်ချင်ပါဘူး။ အခုပြောချင်တာက လမ်းလွဲနေပါပြီ။ ကဲ ချဲထိုးကြမလား။ ဒီနေ့ချဲထွက်မဲ့နေ့ပါ။ ထိုးချင်ရင်
ရဲအပိုင်နယ်ထဲမှာ တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လမ်း(၉၀) က ပုဂံတိုက် ၊ ထီးလင်းတိုက်နဲ့ စကုတိုက်တွေမှာ တရားဝင်ချဲရောင်းနေတာကို ပြောချင်လို့ပါ။ လမ်း(၉၀)ကိုသွားဗျာ။ရောက်ရင် ပုဂံတိုက်ထဲကိုဝင်ဗျာ။ပြီးတော့ ၀င်ဝင်ချင်းကျောင်းတိုက် ( ၀င်ဝင်ချင်း ဗယ်ဘက် အ၀င် ကကျောင်း ) ထဲကိုဝင်ရင်
ချဲဒိုင်(၃)ဒိုင်လောက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုအမှီပြုပြီးတော့မှ လုပ်ကိုင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ကဲ ဖုန်းနံပါတ် လေးရောမှတ်သွားပါဦး။ ၀၂ – ၃၄၁၅၀ ပါ။
ဒါက အမှတ်(၆)ကိုတရားဝင် ငွေပေးပြီးတော့မှ ဖွင့်ထားတာပါ။ ဒိုင်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပြီးတော့ ချဲတင်လား ၊ မဟုတ်ပါဘူး။
နှစ်လုံး ၊ ဘောလုံးအကုန်ရပါတယ်။ သူတို့ကို ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ကာကွယ်ထားတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ စကုတိုက်အထဲမှာ အခုအချိန် တရားဝင် လောင်းကစားကော်မတီဖွင့်ထားတာကလည်း ရဲမှူးအသိအမှတ်ပြုပါပဲ။ဖုန်းလိုင်းတွေ ၊ ကွန်ပျုတာတွေနဲ့ တရားဝင်လုပ်ငန်းလားကြလို့ပါပဲ။ နောက်ထီးလင်းတိုက် ထဲကို ၀င်လိုက်ရင် ဒီအချိန် တွေ့မြင်နေရတာ ရွှေဘို၊ခင်ဦး ၊ ပခုက္ကူ ၊ မြင်းခြံဘက်ကဒိုင်တွေပါပဲ။ အရေးကြီးသတင်းကတော့ မြို့တော်မုန့်တိုက်ရဲ့ သားဟာ ထီးလင်းတိုက်ထဲမှာ ဒိုင်အကြီးစား အဖြစ်ဘုန်းကြီးတွေခုတုံးလုပ်နေတာပါပဲ။ JUDGEMENT ပြောချင်တာက ဘုန်းကြီးတွေကို ဖျက်နေတာ လူတွေ ( အဓိကလောင်းကစားဒိုင်တွေပါပဲ ။)
အချို့ကလည်း ဘုန်းကြီးအမျိုးတွေပါ ။ ဒီတော့ လူတကာ ကြည်ညိုရမဲ့ ကျောင်းထဲ အရက်ပုလင်းထောင် ၊ ချဲ ၊ နှစ်လုံး ထိုးနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကုန်တာပါ။ ဒီတော့ လောင်းကစားဘယ်ကထွက် ၊ ရဲစခန်းကထွက်ပေါ့နော်။ အမှတ်(၆) ကလည်း (၆) မို့။ အမှတ်(၈)ကလည်း (၈) မိုလို့။ အပိုင်နယ်မြေမှာ ရဲအသိအမှတ်ပြု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အခြေစိုက် ချဲဒိုင်တွေရှိနေတာပါ။ ကြည့်ရတာကတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့် ကိုယ်တိုင် ငွေပေးထားတယ်လို့ထင်ချင်စရာပါပဲ။
ပုဂံ ၊ စကု ၊ ထီးလင်း ၊ ဘုရားကြီးတိုက်တွေထဲ အခုသွားရင် အခုရပါတယ်။မဖမ်းချင်လို့ပါ။ ဒီတော့ Mandalay Gazette ၀င်တွေရေ ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ။
အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့် မဖမ်းရဲသော ချဲဒိုင်များအကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ရက်ကျရင် သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေး Post လေးတစ်ခုလောက်တင်ပါဦးမယ်။
မန်းဂေဇက်ဝင်တွေကို ရင်းနှီးခင်မင်လျှက် JUDEGMENT
JUDGEMENT အနေနဲ့ Post တွေမတင်ဖြစ်ပေမဲ့ ရွာသူ/ရွာသားတွေရေးသမျှဖတ်ပြီး အမြဲတမ်းသုံးသပ်လေ့
ရှိပါတယ်။ JUDGEMENT ကိုလည်း ရေးတဲ့ Post တွေကို သုံးသပ်ပေးကြပါဦး။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ အကြောင်း ကို ရေုးပြမယ်ဆိုတဲ့ သူ။ အခုမှ ပြန်ပေါ်လာရလား ။။ ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီး စုံစမ်းနေရလို့လား … :grin: :grin:
ကဲ ….. သူကတော့ ဒဲ့ပဲပြောချလိုက်ပြီ….ကျန်တာ ကျန်တဲ့သူတွေအပိုင်း ………………. မန္တလေးမှာက ဟုတ်လည်းဟုတ်နေတာပဲဗျာ ….. တစ်ချို့ ဦးဇင်းငယ်တွေဗျာ သင်ကန်း(မပေါင်းတတ်လို့ပါ)တဝဲဝဲနဲ့ဗျာ ဆိုင်ကယ်မောင်းကြတယ်….မနက်9ခွဲ 10 နာရီလောက်ထိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတစ်ရုံးရုံး …… ဟိုင်းလက်ကားတွေကိုနောက်ကနေ မြင်မကောင်းအောင် တွယ်စီးတယ်ဗျာ(ဒါကိုတော့နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်…မန်းလေးမှာက ရန်ကုန်လိုလိုင်းကားမပေါဘူးဆိုတော့လည်း) ….. သူ့မြို့သူ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လို့ ရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေအတွက်တော့ ထူးဆန်းနေတယ် …… မြင်ရတာကို မျက်လုံးထဲမှာ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး ကန့်လန့်ကြီးကိုဖြစ်နေတာ ….. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ကြီးမှာ ဒီလိုကြီးမြင်နေရတာ တော်တော်အဆင်မပြေသလိုပဲ ….. ကိုယ်ကမန္တလေးသားမဟုတ်လို့ မျက်စိမယဉ်တာလည်းပါပါလိမ့်မယ် …… ရန်ကုန်မှာလည်း ဘုန်းကြီးအယောင်ဆောင်မဟုတ်ပဲ ဘုန်းကြီးအစစ်ကနေပြီး ဝိနည်းနဲ့မလျော်ညီတာတွေလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ် …… ဒါပေမဲ့ မန်းလေးက ပိုဆိုးနေသလားလို့ပါ ……. မှားတာပါရင်ခွင့်လွှတ်ဗျာ …… (မိရိုးဖလာ မြတ်စွာဘုရားကိုပဲကိုးကွယ် ခဲ့/နေ တာပါ…. ဘာသာခြားမဟုတ်ပါဘူး …….)
အချို့ကလည်း ဘုန်းကြီးအမျိုးတွေပါ ။ ဒီတော့ လူတကာ ကြည်ညိုရမဲ့ ကျောင်းထဲ အရက်ပုလင်းထောင် ၊ ချဲ ၊ နှစ်လုံး ထိုးနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကုန်တာပါ။ ဒီတော့ လောင်းကစားဘယ်ကထွက် ၊ ရဲစခန်းကထွက်ပေါ့နော်။ အမှတ်(၆) ကလည်း (၆) မို့။ အမှတ်(၈)ကလည်း (၈) မိုလို့။ အပိုင်နယ်မြေမှာ ရဲအသိအမှတ်ပြု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အခြေစိုက် ချဲဒိုင်တွေရှိနေတာပါ။ ကြည့်ရတာကတော့ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့် ကိုယ်တိုင် ငွေပေးထားတယ်လို့ထင်ချင်စရာပါပဲ။
ကံစမ်းတယ်လို့ အ ကြောင်းပြပြီး …. ဖော်မြူလာ တိတိကျကျ တွက်ချလို့မရတဲ့ ဂဏန်းသုံးလုံး မတူတူအောင် တိုက်ထိုးတာ … တကယ်ဆို မိုက်မဲလွန်းရာကျတယ်လို့ပဲ ပြောရမလားနော် …. ။
တိုက်ဆိုင်နိုင်ခြေ .. ရာခိုင်နှုန်း အလွန်နည်းပါတယ် … မှန်းထိုးလို့ …. တိုက်သွားတယ်ဆိုလည်း …. ပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏရတာမှမဟုတ်ပဲ … ။ လက်ကြောမတင်း …လွယ်လွယ်နဲ့ ပိုက်ဆံလိုချင် ၊ ရချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပပျောက်ဖို့ဆိုလျှင် ဒီလို အလုပ်တွေ မရှိမှပဲ ရမယ် … ။ စီမံချက်နဲ့ … တိုက်ဖျက်သည့်တိုင်အောင် … လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ ရှိနေသေးလို့ ….. ထိထိရောက်ရောက် ဘာမှ မဖြစ်လာနိုင်သေးဘူး …. ။
သာသနာ အတွက် ဒီဆောင်းပါးမျိုးဖတ်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သာသနာကိုလည်း သန့်စင်စေချင်ပါတယ်။ သို့သော်.. အစစ်အမှန် သာသနာ ပြုနေတဲ့ တရားဟော ဓမ္မကထိကတွေ အပိတ်ခံရတာ ကျောင်းကနှင်ထုတ် ခံရတာတွေ အတွက် ပိုပြီး အသည်းနာမိတယ်။
ရဟန်းသံဃာများကိုလည်း ဘုရားတပည့် သားတော်များပီပီ လောကီ ရေးရာ ၀င်ရောက်မရှုပ်ထွေးပဲ အေးချမ်းစွာ တရားဓမ္မနဲ့ နေထိုင်စေချင်ပါတယ်။
ဆံပင်ရိတ် သင်္ကန်းစည်းပြီး လူမှု ကိစ္စ အ၀၀ တို့ကို စွန့်လွတ်ပြီး ကျင့်ကြံ အားထုတ်ဖို့ ဆိုတာတော်တော် ကို ခက်ခဲလှပါတယ်။
ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀မှာမှ သံယောဇဉ်တွေ ဖြတ်ပြီး ရဟန်းဘ၀ လုပ်ဖို့ ဆိုတာ ပိုပြီး ခဲယဉ်းပါတယ်။
ရဟန်း အဖြစ်နဲ့ ရဟန်းလုပ်ရတာကို လောကီလူမှု့ဘ၀တွေနဲ့ သိပ်ရှုပ်ထွေးလုံးပန်းနေရင်တော့ သာသနာကွယ်ဖို့ ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကို လိုလားပါတယ်။
အမှန်တကယ် ဒဲ့ပြောတော့လည်း မဖမ်းပါဘူးဗျာ။ ဦးရဲမြင့် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကကို နန်းတွင်းထဲမှာ နေတဲ့
အစောင့်တွေ/မိသားစုတွေ ဒိုင်ရှိနေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။သိထားရမှာကတော့ ရဲမှူးကြီးကိုယ်တိုင်လာဘ်စားမှတော့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေဆိုတာပြောမနေပါနဲ့တော့။ပြောတာ
အထောက်အထားရှိတယ်နော်။အမှတ်(၆)ကဘယ်ရဲ ၊ အမှတ်(၈)က ဘယ်ရဲ ၊ ဘယ်နယ်ထိန်းနဲ့ ဘယ်ရဲမှူး
အကုန်သိတယ်။မဖမ်းသေးလို့ကတော့ ၀န်ကြီးပါ နေပြည်တော်အထိတိုင်စာပို့မယ်။ရဲမှူးတွေကိုလည်း
တကယ်ပါဘဲချဲထိုးတဲ့လူတွေအကြောင်းကတော့မပြောချင်တော့အောင် ပါဘဲဒိုင်တွေရှိသလို ထိုးသားတွေကလည်း အရမ်းကိုပါဘဲညီမကိုယ်တွေ့လေးတခုကိုပြောပြချင်ပါတယ် ညီမတို့အိမ်မှာအ၀တ်လာလျှော်တဲ့အန်တီကြီးကလေ သူ့နာမည်ကကရင်မလို့ခေါ်ပါတယ်သူကအ၀တ်မလျှော်ရသေးဘူးညီမအမေဆီကပိုက်ဆံတောင်းတယ်ဒါနဲ့အမေကလည်းကရင်မရယ်အ၀တ်တောင်မလျှော်ရသေးဘူးဘာလို့်ပိုက်ဆံအရင်တောင်းတာလဲအရေးကြီးလို့လားလို့မေးတော့သူကလည်းမလိမ်ပါဘူးပြောပါတယ်2လုံးထိုးဖိုးလို့ပြောပါတယ်ဘယ်လောက်ဆိုးလည်းကြည့်ပါအုံးကိုယ်ကသူများအိမ်မှာကြိုးစားပမ်းစားနဲ့အ၀တ်လျှော်တယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံကိုမုန့်စားပစ်လို့သားသမီးတွေအတွက်အသုံးပြုရတယ်ဆိုတော်သေးပါတယ်အလောင်းကစားပပျောက်ရင်တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်မှာပါလွယ်လွယ်ရလွယ်လွယ်ကုန်နေကျတာပါသူတို့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ပိုက်ဆံတွေအလကားဖြစ်သွားတာကိုမသိကျလို့ပါဒါကြောင့်လည်းဒိုင်တွေများလာတယ်
တကယ်ပါဘဲချဲထိုးတဲ့လူတွေအကြောင်းကတော့မပြောချင်တော့အောင် ပါဘဲဒိုင်တွေရှိသလို ထိုးသားတွေကလည်း အရမ်းကိုပါဘဲညီမကိုယ်တွေ့လေးတခုကိုပြောပြချင်ပါတယ် ညီမတို့အိမ်မှာအ၀တ်လာလျှော်တဲ့အန်တီကြီးကလေ သူ့နာမည်ကကရင်မလို့ခေါ်ပါတယ်သူကအ၀တ်မလျှော်ရသေးဘူးညီမအမေဆီကပိုက်ဆံတောင်းတယ်ဒါနဲ့ အမေကကရင်မအရေးကြီးလို့လား မေးတယ် မေးတော့သူကလည်းပြန်ပြောပါတယ် မဟုတ်ဘူး ၂လုံးထိုးဖို့တဲ့လေ ဘယ်လောက်ဆိုးလည်းကြည့် စားလို့ဆိုလည်း တော်သေးတယ် သားသမီးအတွက်ဆိုလည်းတော်သေးတယ် ကိုယ်ကတော့သူများအိမ်မှာအ၀တ်လျှော်ရတယ် ပြီးတော့အရေးမပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ် တကယ်အလောင်းကစားပပျောက်ရင်အရမ်းကောင်းပါတယ်